Diabeta amin'ny alika: soritr'aretina, fitsaboana ary sakafo | Tontolo alika
Tombanana amin'izany alika iray amin'ny 500 dia mety voan'ny diabeta. Tsy iray amin'ireo aretina resahina matetika amin'ny alika io, saingy azo antoka fa hanjary olana izany raha manana alika amin'ity aretina ity isika ary tsy fantatsika ny fomba hamantarana azy ara-potoana. Ny diabeta amin'ny alika dia misy soritr'aretina sy fitsaboana tsy maintsy fantatsika hiatrehana io aretina io.
La diabeta amin'ny alika Tsy mitovy amin'ny an'ny olombelona izy io ary tokony hojerenao daholo ny pitsopitsony ao. Ho fanampin'izay, tsy maintsy mahafantatra bebe kokoa momba ny fizotran'ny diabeta sy ny dikan'izany amin'ny vatana rehetra isika, satria ny fananana fampahalalana dia ahafahantsika miatrika an'io olana io.
1 Diabeta amin'ny alika sy ny olombelona
1.2 Famantarana ny diabeta amin'ny alika
1.4 Fitsaboana ny diabeta amin'ny alika
2 Torohevitra hafa
Diabeta amin'ny alika sy ny olombelona
Ny diabeta amin'ny olombelona dia mety misy karazany roa. Amin'ny lafiny iray dia manana diabeta karazana I aho izay noho ny tsy fahombiazan'ny fototarazo dia tsy afaka mamokatra insuline ny vatana. Etsy ankilany, misy diabeta karazana II izay mampivoatra ny vatana fanoherana ny insuline ny vatana, izay matetika mifandray amin'ny hatavezina. Ny alika no manana ny diabeta type I, izay olana ara-pirazanana izay tsy mamokatra insuline ny vatana.
La glucose amin'ny ra no manome hery ny sela, fa mba hahafahan'izy ireo manodina sy mamantatra izany dia ilaina ny hidiran'ny insuline, izay vokarin'ny pancreas, taova iray simba amin'ny alika voan'ny diabeta. Amin'ireny tranga ireny, amin'ny tsy famokarana insuline dia tsy manaiky ny glucose na afaka mampiasa azy ireo sela, ka miangona ao anaty rà. Ny proteinina sy ny tavy dia lanina satria mila angovo ny vatana ary ny filokana kosa dia voasiana amin'ny sivy, satria tsy afaka mampiasa azy ireo ny sela.
Famantarana ny diabeta amin'ny alika
Mba hahafahan'ny tompon-trano mamantatra ny olana amin'ny alika dia mila mazava ny momba ny sasany amin'ireo soritr'aretina hita sy mazava. Amin'ny alika diabeta dia mitranga izany amin'ny alàlan'ny fandroahana glucose amin'ny urine misotro betsaka kokoa noho ny mahazatra izy ireo ary mikiaka be koa izy ireo. Ny tsy fahampian'ny fampiasana glucose dia mahatonga azy ireo hihinana bebe kokoa amin'ny angovo, na dia tsy mihombo aza satria tsy ampiasaina io glucose io. Amin'ny ankapobeny, tokony handeha ho any amin'ny mpitsabo biby isika raha mahita fa misotro sy misotra be loatra ilay alika, mihoatra ny mahazatra. Mety ho mariky ny zavatra hafa izany saingy tsara kokoa ny matoky tena. Mety koa ny fahazotoan-komana bebe kokoa sy ny tsy lanjan'izy ireo, ankoatry ny tsy fahantrana sy tsy fananan-kery.
Amin'ny fitsidihana ny mpitsabo dia afaka mamaritra raha toa ka mifanentana amin'ny soritr'aretin'ny diabeta karazana I amin'ny alika ireo soritr'aretina ireo, izay fahita matetika. ny mpitsabo biby dia haka santionany amin'ny urine hamakafaka azy io ary hamaritana raha misy glucose ambony ao anatiny na misy aretina. Hatao koa ny fitsapana ra hahitana ny tahan'ny glucose ao amin'ny ranao. Raha avo loatra ny glucose amin'ny glucose dia midika izany fa tsy manafina insuline ampy ny vatany hampiasa io glucose io amin'ny ra, izany hoe diabetika ilay alika. Amin'ny ankapobeny, rehefa manao fitsapana rà amin'ny alika, dia voaharatra ny ampahany kely amin'ny paw mba ho mora idirana amin'ny lalan-drà ary atao haingana ny fitrandrahana izay ilaina fa mbola mijanona ny alika.
Fitsaboana ny diabeta amin'ny alika
Ny olana amin'ny diabeta dia hoe a aretina mitaiza amin'ny alika, Tsy azo sitranina izy io, noho izany ny fikarakarana azy dia mikendry ny hifehezana ny aretina sy hisorohana ireo olana hafa mifandraika amin'izany, toy ny katarakta amin'ny maso. Rehefa mitsabo ny alika dia matetika misy dingana voalohany fanamafisana, satria ny aretina dia tsy voafehy raha tsy fantatra fa ny alika no manana azy. Amin'ny dingana fitombenana, matetika ny insuline dia omena ny alika mba handanjalanja ny vatany. Etsy ankilany, amin'ny fikolokoloana dia homena sakafo manokana isika ary fanovana vitsivitsy izay hisy fiatraikany amin'ny fanaon'ny alika isan'andro.
Amin'ny ankapobeny, ny mpitsabo biby dia tsy maintsy mametraka izay fatra insuline ilain'ny alika, satria samy hafa ny alika rehetra. Mba hahalalana an'izany, hatao ny fanaraha-maso glucose amin'ny ra ary ny insuline dia hotanterahina any amin'ny mpitsabo biby, izay hangataka amin'ny tompony ihany koa mba hifehezana ny sakafo lanin'ny alika na fisotro isan'andro. Ity dia fomba iray hamaritana sy hifehezana ny aretina amin'ny isam-batan'olona.
La ny fihinanana sakafo dia ho antony lehibe iray hafa amin'ny fiainan'ny alika diabeta. Tokony hofehezintsika tsara ny habetsany, araka ny natoron'ilay mpitsabo biby. Ho fanampin'izany, ny sakafo mety indrindra ho azy ireo dia ahitana tavy voafantina, gliosida sarotra ary fibre be dia be. Na dia azo fehezina amin'ny sakafo ara-barotra aza ny sakafo, ny marina dia azo atao ihany koa ny manome azy io ho sakafo an-trano tsara, miaraka amin'ny torolàlana sy tolo-kevitra omen'ny mpitsabo biby antsika.
Es azo atao ny manadio ny alika diabeta, indrindra ny vehivavy, satria ny fiovan'ny hormonina dia mety hisy fiatraikany amin'ny fifehezana ny aretina ihany koa. Ho fanampin'ny fisorohana aretina hafa dia afaka hifehy diabeta tsara kokoa amin'ny alika isika.
Ny tompony dia tsy maintsy mitantana insuline raha vao voafehy ny fatra isan'andro. Zava-dehibe ny fanarahana ny torolàlana momba ny fiarovana izay didin'ny mpitsabo biby. Amin'ny ankapobeny, matetika ireo dia mila mitazona ny insuline ao anaty vata fampangatsiahana, fa tsy ao anaty vata fampangatsiahana, ary tokony hanana toerana mahitsy.
El fanatanjahantena no atoro anao amin'ny alika rehetra. Diabeta ihany koa io amin'ny alika, satria manampy amin'ny fanatsarana ny lalan-drà io, hampihena ny haavon'ny glucose ao anaty ra, saingy tsy maintsy tadidintsika foana fa mety hidina be izany. Amin'ny ankapobeny, ny tolo-kevitra ao amin'ireo alika ireo mba hifehezana hyperglycemia dia ny fanatanjahan-tena antonony sy tsy tapaka, isan'andro. Miaraka amin'ny dia tsara vitsivitsy isan'andro dia hanaovantsika fampihetseham-batana, fa tsara kokoa ny misoroka ireo hetsika mahery loatra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » aretina » Diabeta amin'ny alika
Inona no hatao raha matahotra ny balafomanga ny alikako
Fa maninona ny alikako no miondrika amin'ny toerana rehetra